Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Tuubo / Tuubo - Laser Dahab ah
Mashiinkayaga goynta leysarka tuubada waxaa loogu talagalay in lagu gooyo tuubooyin bir ah oo qaabab kala duwan leh, oo ay ku jiraan wareega, laba jibbaaran, leydilaalka, oval, iyo sidoo kale astaamo leh qaybo iskutallaab furan oo kala duwan (eg I-beam, H, L, T, iyo U cross- qaybaha). Xalalka leysarka tuubada ayaa looga golleeyahay in lagu kordhiyo wax soo saarka, dabacsanaanta iyo goynta tayada tuubooyinka iyo astaamaha lagu dhameystirayo goynta leysarka fiber ka sii fiican.
Codsiyada tuubbooyinka la warshadeeyay ee laser-ka iyo astaamaha ayaa kala duwan, laga bilaabo warshadaha baabuurta, injineernimada farsamada, dhismaha naqshadaha, naqshadeynta alaabta guryaha ilaa warshadaha petrochemical, iwm. fursadaha.
Qaab No.: P1260A
Mashiinka Mashiinka Goynta Laser Fiber Tirada Ugu Yar
Mashiinka goynta leysarka fiber-ka cabbirka ugu yar ee P1260A, oo leh nidaamka quudinta gawaarida gaarka ah leh. Xoogga saar goynta tuubada cabbirka yar.
Qaab No.: P120
Mashiinka Goynta Laser Fiber Tube Round
P120 waa mashiin goynta laser-ga qaaska ah ee tuubbada wareega ah (tubbada wareega). Waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu beddelo mashiinka wax lagu jaro warshadaha qaybaha mootada, warshadaha ku habboon dhuumaha, iwm.
Qaab No.: P2060A / P3080A
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xaraashka ah
Mashiinka goynta leysarka tuubada waxqabadka sare leh oo si otomaatig ah u dejinaya una dejinaya. Goynta wareega, leylaalka, laba jibbaaran iyo qaababka kale ee tuubbada si loo qanciyo baahiyo badan oo loo jarayo tuubbada.
Qaab No.: P2060 / P3080
Mashiinkaan birta otomaatiga ah ee otomaatigga ah ee otomaatigga ah waxaa lagu qalabeeyaa wiishka gacanta lagu sameeyo iyo xayndaab buuxa oo lagu soo saaro qaybo tayo sare leh oo leh qaabab iyo cabbirro kala duwan.
Qaab No.: P2080
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Laser P2080
Gaar ahaan tuubbada birta ee goynta leysku wareegayo, afargeeska, leydilaalka, saddexagalka, oval, tuubbada dhexda iyo tuubbada & tuubbada qaabaysan. Dhexroor dibadda tuubada waxay noqon kartaa 20-200mm, dherer 8m.
Qaab No.: P2060- 1KW
1KW Fiber Laser tuuboyinka Mashiinka Mashiinka
Mashiinka jarjarada leysarka oo leh isha laser 1 fiber. Dhumucda darbiga ugu badan 12mm steel carbon, 6mm ahama, 4mm alumin ...
Qaab No.: P2060-2000W
2000W Fiber Laser Goynta Machine for Birta tuuboyinka iyo Tube
Mashiinka birta iyo mashiinka goynta tuubada tuubada oo leh isha laser 2000w fiber. Dhumucdiisuna waxay derbiga goynta ugu badan 15mm steel carbon, 10mm Wasaqda ...